Ny Zorrilla Train, fomba hafa hahitana an'i Valladolid | Vaovao momba ny dia
Eo anelanelan'ny 3 febroary sy 24 novambra 2018 dia hiparitaka eo anelanelan'i Madrid sy Valladolid ny Zorrill Train isaky ny asabotsya, fandraisana an-tanana an'i Renfe Viajeros sy ny filankevitry ny tanànan'i Valladolid mba hahatonga ny mpandeha hankafy andro ara-kolontsaina, fizahan-tany ary gastronomic hafa ao amin'ny tanànan'i Castilian-Leon.
Drafitra ririnina tena tsara tanterahina miaraka amin'ny namana na fianakaviana. Ho fanampin'izay, Valladolid dia nahatanteraka ny fankalazana ny faha-200 taonan'ny nahaterahan'ilay poeta sady mpanoratra tantara an-tsehatra José Zorrilla Ka raha tsy afaka manatrika ny fety dia mety ho hevitra lehibe ny fitsangatsanganana any Valladolid miaraka amin'ny Zorrilla Train.
1 Manao ahoana ny dia amin'ny Zorrilla Train?
2 Aiza no hividianana ny tapakilan'ny Zorrilla Train?
3 Ohatrinona ny tapakilan'ny Zorrilla Train?
4 Inona no ho hitanao ao Valladolid?
5 Aiza no hihinana ao Valladolid?
Manao ahoana ny dia amin'ny Zorrilla Train?
Tahaka ny Renfe Medieval Train mankany Sigüenza, ao amin'ny Zorrilla Train dia afaka mankafy dia an-tsehatra an-tsehatra iray izay hampihetsiketsika ny mpandeha ny mpilalao sarimihetsika iray antsoina hoe poeta sady mampahafantatra azy ireo ny atiny sy ny zavatra mety hatolotr'i Valladolid anao mandritra ny faharetanao Fitsangatsanganana.
Ny dia an-tsehatra dia amin'ny asabotsy voalohany isam-bolana sy amin'ny 24 Novambra. Raha vantany vao ao an-tanàna ianao dia ho afaka handinika lova goavambe mahafinaritra ary koa mankafy ny sehatra kolotsaina isan-karazany sy ny tolotra gastronomika.
Aiza no hividianana ny tapakilan'ny Zorrilla Train?
Ny tapakila hahatongavana ao amin'ny Zorrilla Train dia tsy maintsy vidiana mialoha any amin'ireo garan-dalamby izay misy ny varotra mialoha, amin'ny milina fivarotana fiara-mandeha na amin'ny laharana telefaon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa Renfe.
Ohatrinona ny tapakilan'ny Zorrilla Train?
Ny vidin'ny tapakila ho an'ny olon-dehibe dia 46,60 euro raha 34,90 euro ny zaza. Ny ankizy latsaky ny efatra taona izay tsy mahazo seza dia handeha maimaim-poana.
Mila mividy tapakila mandroso sy miverina ny mpandeha fa afaka miverina amin'ny asabotsy mitovy izy ireo na mampihemotra ny alahady miaraka amin'izay.
Ny fitsangatsanganana dia natao tamin'ny fiaran-dalamby Avant miala ny gara Madrid - Chamartín amin'ny 12.00 ora antoandro ary tonga ao Valladolid amin'ny 13.05:20.35 hariva. Ny fiarandalamby miverina dia miala amin'i Valladolid amin'ny 21.40 ora XNUMX hariva ary tonga ao Madrid-Chamartín amin'ny XNUMX:XNUMX alina.
Inona no ho hitanao ao Valladolid?
Valladolid dia tanàna iray izay manan-javatra betsaka hatolotra ny mpitsidika fa raha jerena fohy, raha ny fijery ara-tantara sy ara-kolontsaina no ilaina dia ny: Katedraly, ny Ben'ny tanàna ao amin'ny Plaza, ny National Sculpture Museum, ny Iglesia de la Antigua, ny Monasiteran'ny Fiangonanan'i San Benito, ny Akademian'ny Cavalry, ny Fiangonan'i San Pablo, ny Tranombakok'i Patio Herreriano, ny Plaza del Viejo Coso, ny Tranombakok'i José Zorrilla ary ny Campo Grande.
Manolotra ao amin'ny Biraon'ny mpizahatany Valladolid (Calle Acera de Recoletos s / n) ny tapakila Renfe ho an'ny Zorrilla Train, hanana maimaimpoana ny Valladolid Card Tourist Card ianao. Amin'ity karatra ity dia hanana fidirana maimaim-poana any amin'ny tranombakok'i Valladolid ianao, ny bus fitaterana fizahan-tany ary hahazo miditra amin'ny tranombakoka José Zorrilla House-Museum ianao.
Aiza no hihinana ao Valladolid?
Manerana ny tanàna dia misy toerana azo hanina mahaliana be dia be. Manodidina ny Plaza Ben'ny tanàna, ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana betsaka indrindra ao Valladolid dia mivondrona mba hanandrana ny paoma sy pinchos tsara indrindra ao afovoan-tanàna.
Na izany aza, hatramin'ny nitokanana azy tamin'ny 2013, ny Valladolid Gourmet Station dia iray amin'ireo malaza indrindra. Any akaikin'ny gara misy ny tanàna no misy azy ary nanjary toerana gastronomika iray ahafahanao manandrana ireo vokatra tsara indrindra miaraka amin'ny Denomination of Origin sy ny harena culinary hafa.
Ny Valladolid Gourmet Station dia miavaka amin'ny karazany maro karazana sy ny fahafahan'ny mpampiasa rehefa misafidy ny sakafony amin'ny alàlan'ny rafitra fanandramana fanandramana vaovao. Etsy an-danin'izany, ny efitrano fianarana Escuela Gourmet vaovao misy multifunctional ihany koa dia mikendry ny hampanakaiky kokoa ny mpampiasa solika amin'ny alàlan'ny seho mahandro mivantana, fanandramana vokatra na fanaovana sonia boky mifandraika amin'ny gastronomie.
Ity tsena gastronomika ity dia tonga hamita ny tolotra tsy mampino an'i Valladolid amin'ny resaka tapas sy pinchos. Niova nandritra ny taona maro ho iray amin'ireo kapitaly lehibe an'ny tapas Espaniôla, tsy azonao hadino ity enclave foodie vaovao ity amin'ny lalanao mamaky Castilla y León.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Ny Zorrilla Train, fomba iray hafa hahitana an'i Valladolid
Fizahan-tany any Tel Aviv